I-WatchOS 4 yaziswa: ezinye izaziso kunye nokuphuculwa komqeqeshi wabucala | Ndisuka mac
I-WatchOS 4 yaziswa: ezinye izaziso kunye nokuphuculwa koqeqesho lomntu
UTim Cook uthathe isigqibo sokuba aqale ngokubonisa iindaba esiza kuzibona kwinkqubo yokusebenza ye-Apple Watch elandelayo, iApple WatchOS 4 . Abasebenzisi abakhalaze ngokusetyenziswa kancinci okanye ukunxibelelana newotshi, baya kuba nethamsanqa. Ukusukela ngoku ukuya phambili, iwotshi iya kusinika ulwazi oluninzi ngemini yosuku nge izaziso ezikrelekrele, njengexesha eliza kuthatha ukufika ekhaya, lixesha lokuba simke ekhaya. Ukongeza, sinokuninzi ukucofa okuhlaziya ngokupheleleyo iwotshi yethu, Ukunika imbonakalo yangoku. Njengomzekelo, umbala opheleleyo womboniso wexesha, okanye ukudityaniswa kwabalinganiswa abatsha ukusixelela ixesha: sinabalinganiswa beBali yokudlala efana neBuddy okanye iBuzz Lightyear.
Kodwa elona candelo lithathe olona phuhliso ukuza kuthi ga ngoku kukusetyenziswa kwe umntu oqeqesha wena. Amanqanaba amatsha asivumela ukuba sikhethe umdlalo esiza kuwenza, kunye nolwazi oluneenkcukacha malunga nomgama, ukubek'esweni kwentliziyo, phakathi kwabanye. Akukho nto ingamonela kwimilindo yezemidlalo.
Inkcazo iphele ngomboniso wenxalenye yezemidlalo, esebenza ngokugqibeleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-WatchOS 4 yaziswa: ezinye izaziso kunye nokuphuculwa koqeqesho lomntu
Inkqubo entsha yeMac iya kubizwa ngokuba yiMacOS ePhakamileyo yeSierra